आजको मुन्द्रेको कमेडी क्लबको ४८ औं एपिसोडमा “पोइ पर्यो काले” बाट पुजा र आकाश ! हेर्नुहोस् भिडियो « Dhankuta Khabar
आजको मुन्द्रेको कमेडी क्लबको ४८ औं एपिसोडमा “पोइ पर्यो काले” बाट पुजा र आकाश ! हेर्नुहोस् भिडियो
तर, अझै पनि शोमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । उनले भनेजस्तै कार्यक्रम सुधारात्मक बन्दै गईरहेको छ । बृहत रुपमा मनपराऊदै गईएको ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को ४८ भाग मा पुजा र आकाश .. – हेर्नुहोस् भिडियो